China One Moniter Miaraka amin'ny orinasa 5 Blades sy mpamatsy | tana
Mole dia manana ny traikefa, ny fanoloran-tena ary ny fanodinana ireo dingana famokarana ilaina hamoronana vahaolana kalitao, ary ampitainay aminao ny lanja amin'ny endrika vahaolana farany mamaky.
Manana ny traikefa sy ny fahalalana ilaina amin'ny fanamboarana fitaovana fitsaboana tokana ampiasaina ny mpiasa manana ny fahaizany ary ny toeram-pamokarana mandroso dia ahafahan'izy ireo mivoatra hamaly ny fangatahanao raha ilaina izany.
Ny fifantohana matanjaka amin'ny fanavaozana tokana ampiasaina sy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpitsabo momba ny fahasalamana, izay manome torohevitra anay sy miara-mampivelatra ny vokatray, dia miteraka fahatsarana hatrany.
Ny Mole dia natao ho fitaovana voalohany indrindra amin'ny fampidiran-dresaka. Ny fampisehoana avo lenta, vita tany Amerika, dia misy fiantohana maharitra 1 taona. Ny fampisehoana matanjaka, feno loko, smudge-proof, tsy manjelanjelatra dia afaka manohitra ny fanadiovana miverimberina sy ny fampiasana azy matetika.
Ny fampisehoana Mole dia mavesatra maivana, mandefitra ary miasa amin'ny bateria. Ny fampisehoana azo ampiasaina dia tonga amina fonosana miaro azy. Ny lelany dia fonosina tsirairay ka mahatonga ny Mole ho mora entina.
Ny lelan-tsolika azo avela dia mamela ny fampiasana ara-toekarena ny Mole ho an'ny fampidiranao rehetra. Ny vidiny ambany isaky ny fomba fanao miaraka amin'ny fahaiza-manao sary an-tsary avo lenta no mahatonga izany ho sarobidy indrindra amin'ny fikarakarana marary tsara indrindra. Miaraka amin'ny Mole dia azonao atao ny manatsara ny fikarakarana ny marary amin'ny alàlan'ny fanananao fahaiza-manao sary an-tsaina avo lenta ho an'ny fidiran-tsaina tsirairay, amin'ny vidiny mirary.
Teo aloha: Moniter iray miaraka amin'ny lelany 4
Manaraka: Moniter iray miaraka amin'ny lelany 7
Laryngoscope ho an'ny zaza tsy ampy taona
Laryngoscope momba ny biby
Moniter iray miaraka amin'ny lelany 10